I-Y & R ingumkhiqizi nomhlinzeki ofanelekayo ohlolile
futhi evunyelwe yi-SGS, silandela ngokuqinile i-
Ukuphathwa Kwekhwalithi Uhlelo lwe-ISO9001: 2015.
Sizibophezele ekukhiqizeni nasekusabalaliseni iphothifoliyo ebanzi ebanzi yezinto ezikhethekile, izinto zokusetshenziswa, izithasiselo, izixazululi nezixazululo zezimonyo zomhlaba / ukunakekelwa komuntu siqu, ezemithi, ukudla, i-H & I nezinye izimboni ze-Hi-Tech.
Sihlala sizinikele ekukhiqizeni ubuciko besimanje, sisabalalisa, sithola imikhiqizo esezingeni eliphakeme, sinikeza impendulo nensizakalo engu-7 * 24hrs.
Inhloso yethu ukusiza bonke ozakwethu ukuthi bathole imikhiqizo ehlukile yokuzisebenzisa ekwakhiweni kwabo, futhi siqinisekise ukuthi zonke izithako / izinto zokusetshenziswa ziphephile, ziphilile, zizinzile ezinikezwa ngentengo yokuncintisana kanye nangesikhathi esisebenza ngaso.
Ukungafihli, Ukuthemba, Ukwabelana, Ukubambisana kuyindlela yethu yokusebenza ezinzile nabalingani bethu bomhlaba wonke, sihlala sifuna i-'Mutural Trust & Sharing, Mutual Cooperation & Benefits ', futhi senza imizamo yethu yokuletha imikhiqizo esezingeni elifanele, insizakalo kozakwethu.
I-Y & R ayisiyena nje umphakeli wezithako / izinto zokusetshenziswa, singumlingani wakho oqotho Asigcini ngokuletha imikhiqizo kuphela, kodwa nangedumela lethu, isithembiso, insizakalo, inani elengeziwe Ukusiza ozakwethu bonge ukukhokha kuzindleko, isikhathi kanye ukunciphisa ubungozi bokucabangela noma yibaphi abahlinzeki abasha, singanikeza kahle insizakalo yemikhiqizo yephakheji noma insizakalo yokuthola.
Eminyakeni edlule, i-Y & R iba ngomunye wemithombo enokwethenjelwa emhlabeni yezithako ezahlukahlukene kanye nezinto zokusetshenziswa zamakhemikhali. Sigxile ekukhiqizeni nasekuhlinzekeni ngamaVithamini, ama-PVP Polymers nama-Pyrrolidone solvents / intermediates, Polyquaterniums, PVM / MA Copolymers, Acrylates Copolymers, Kojic Acid, Kojic Acid dipalmite njll Imikhiqizo yethu efakiwe / eshisayo efaka i-DL-Panthenol, D-Panthenol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Biotin, PVP K30, PVP K90, PVP / VA 64,I-N-Octyl-2-Pyrrolidone, Polyquaternium-1,I-Polyquaternium-10, i-Polyquaternium-11, i-Acrylates Copolymers, i-Kojic Acid, i-Kojic Acid Dipalmite kanye nokunye inethiwekhi yethu yamanje yemakethe iyakhula iye eN / S America, Europe, Oceania, ENingizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika nasemhlabeni jikelele.
I-Y & R ihlala izibophezele ekusebenziseni isu lokuthuthuka elifinyelelekayo, eligxile ekuvumelaneni komuntu nemvelo ngokulwela ukudala indlela ephucukile ethuthukayo.